Oktobra 2017 - Websetnet
Isam-bolana: Oktobra 2017
Kaonty iPhone X Kaosisy ary aiza no hividianana
Ny iPhone X dia azo amidy ary mitaky ny fahatarana hatramin'ny faran'ny taona, fa ireo mpanjifany dia tokony mbola afaka mahazo tranga ho an'ny fitaovana, na inona na inona efa nomanina mialoha. Misy marika maromaro manolotra ny traikefa iPhone X amin'ny endrika samihafa ...
iPhone X Ranovoram-piofanana: Fandaniam-bola ho an'ny Vidim-panafody sy ny safidy azo atao
Ny iPhone X dia azo alaina mialoha ny filaharana ary ny fitaovana voalohany dia andrasana amin'ny Nov. 3. Ny smartphone dia i Apple izay miavaka indrindra hatramin'izao miaraka amin'ny endri-javatra toy ny fampisehoana an-tsisintany sy ny endri-maso fanalahidy FaceID. Fa iPhone X koa dia ...
Kid3 Audio Editor 3.5.1 Fanatsarana High-DPI (Ahoana no fametrahana)
Nahazo famoaham-baovao tamin'ny alàlan'ny famoahana v3 androany androany ny editor of Kid3.5.1 audio tag miaraka amin'ny fanamafisana ny fanatsarana sy ny famahana azy vitsivitsy. Ny fiovana ao amin'ny Kid3 3.5.1 dia ahitanao: Fifandraisana amin'ny CDV importées sy exportées miaraka amin'ny cellules misy endri-tsoratra vaovao. Aza aseho sary tsy fantatra momba ID3v2.3 TDAT, TIME, ...
MACOM dia mividy ny X-Gene CPU Business AppliedMicro
Nanambara ny MACOM tamin'ny herinandro lasa teo fa nanao fifanarahana hamidy ny fivarotam-pandrafetana madinika izay novidina avy amin'ny AppliedMicro tao amin'ny Project Denver Holdings, orinasa vaovao notohanan'ny orinasam-pitantanana The Carlyle Group. Nosoran'i MACOM ny famerenana ny AppliedMicro tany am-piandohan'ny 2017. Tamin'izany fotoana izany, ...
Windows 10 Soso-kevitra: Mampifanitsy ny varavarankely iray avy amin'ny sehatra iray amin'ny iray hafa
Raha manana fananganana roa na marika ianao, dia misy sariohatra tena tsara izay ho hitanao fa ilaina sy ampiasaina tsara. Ny fomba haingana hampandeha ny varavarankely mihetsika amin'ny efijery iray mankany amin'ny iray hafa Ny fomba haingana indrindra hanaovana izany dia ny fampiasana ny klavier manaraka ...
Ny fitaovana mihaino, ny microphone azon'ny Smartphone dia afaka miezaka bebe kokoa amin'ny spider seza
Ny fanehoana tsangambato ao amin'ny sofinao dia mety hahatalanjona ny fihainoana, fandinihana vaovao hita. Tsy mivantana, mazava ho azy, fa ny sehatra misy spider amin'ny microphones dia mahatonga azy ireo ho mora mihatsaravelatsihy sy manatsara ny fitaovana fihainoana, hoy ilay fianarana. Ny haino aman-jery dia mifototra amin'ny baolina anatiny.
Sarotra ve ny mividy AppleCare + ho an'ny iPhone X?
Sarotra ve ny mividy AppleCare + ho an'ny iPhone X? Rehefa avy nandany vola arivo dôlara farafahakeliny tamin'ny finday vaovao X, ianao dia mety adihevitra raha tena mendrika ny handany vola an-jatony vitsivitsy fanampiny ao amin'ny drafitra AppleCare + mba ahazoana antoka ny vaovao mahafaly anao.
Ny iPhone X TrueDepth Fanaraha-maso Camera dia efa miorina ankehitriny ary tsy hisy fiantraikany eo amin'ny 2018
Apple's TrueDepth kamera dia singa mahavariana amin'ny teknolojia ao amin'ny iPhone X saingy noho ny famokarana ireo olana atolotry ny mpamatsy ny orinasa, dia nisy fiantraikany ihany koa teo amin'ny singa iray manontolo ny orinasa afaka namokatra tamin'ny fotoana voafaritra. Ny zavatra izao dia mijery tsara ho an'ny ...
Lozam-pampandrosoana lelavola antiX-17 no nalefa!
Iray amin'ireo lozam-pampandrosoana goavana indrindra i Linux, AntiX-17 dia nantsoina hoe "Heather Heyer" vao haingana indrindra ny antiX. Ny famoahana vaovao dia miorina amin'ny Debian 9.2. Tahaka an'i Devuan Linux, antiX dia iray amin'ireo fizarana Linux tsy misy Linux. AntiX-17 dia manohana ny processeur 32-bit sy 64-bit izay ...
iPhone X mba hanafenana fanovozan-kevitra momba ny fampandrenesana amin'ny alàlan'ny sary
Ny sainam-pirenen'i Apple amin'ny taona, ny iPhone Hiantehitra amin'ny endriny ambony dia hitondra ny làlana ho an'ny vahoaka amin'ny ankapobeny amin'ity herinandro ity. Na dia misy fiantraikany amin'ireo endri-pandinihana lehibe hafa izay andrandraina aza, ny sasany amin'ireo kely kokoa dia mendrika hijery ihany koa. Raha ny marina, ny iPhone X ...
Apple iPhone X's FaceID Teknolojia: Inona no azon'izy ireo midika ho fahalalahana sivily
Ny rindrambaiko vaovao vaovao momba ny endriky ny endrika apetrak'i Apple ho an'ny famokarana ny iPhone iPhone X dia nametraka fanontaniana mikasika ny fiainana manokana sy ny fahatsapana ny teknolojia amin'ny fisorohana ny fanafihana. Ny Apple iPhone X dia napetraka hamidy amin'ny Nov. 3. Ny tontolo dia miandry amin'ny fofom-bovoka toy ny planan'i Apple ...
iPhone X Review Roundups Fihetsiketsehana ataon'ny Critique manasongadina ny tsy fahampian-tsakafo, mijery voalohany ny [WATCH]
Ny fanehoana an-tsarimihetsika sy ny tsy firaharahian'ny iPhone X dia manomboka mivoatra ary amin'izao fotoana izao, henjana ianao hitady zavatra tena ratsy momba ny smartphone. Ny ekipa Highsnobiety, ohatra, dia tsy nanam-bintana ho an'ny iPhone X, fa tsy midika izany fa tsy misy ...
Gscan2pdf dia nahatratra ny 1.8.8 tamin'ny fikandrana sasany (Ubuntu PPA)
Gscan2pdf, fitaovana GUI tsotra hamokarana PDF na DjVus avy amin'ny tahirin-drakitra, dia tonga tamin'ny famoahana 1.8.8 vaovao ora vitsy lasa izay tamin'ny famandrihana bug sasany sy ny fanavaozam-baovao. Ny fiovana ao amin'ny Gscan2pdf 1.8.8 dia ahitanao: Fisafotram-peo 1 sy 2 mari-tsoratra rehetra avy amin'ny fampitandremana. Asehoy ny hafatra voalohany, ...
Fandefasana terminal amin'ny famandrihana amin'ny Linux Kernel 4.14-rc7 Amin'ny Ubuntu Systems
Fanavaozana ny Linux Kernel 4.14-rc7 amin'ny Ubuntu Systems. Ny Kernel 4.14-rc7 dia azo apetraka amin'ny Ubuntu Systems - amin'ny alalan'ny baiko Terminal. Ny Kernel 4.14-rc7 dia mitondra fiovana sy fanamafisana vitsivitsy miaraka amin'ny fampivoarana ny tambazotra sy ny rafitra. Kernel 4.14-rc7 Nanambara ny famoahana 4.14-rc7 ny Kernel, nanoratra i Linus Torvalds: "Miverina any an-trano, ary miverina ...
Corebird 1.7 dia nivoaka - Ahoana no hametrahana ny mpanjifa Twitter mpanjifa amin'ny Ubuntu 17.10
Corebird 1.7 dia nivoaka - Ahoana no hametrahana ny mpanjifa Twitter Corebird amin'ny Ubuntu 17.10 sy Didy. Corebird dia mpandrindra Twitter ho an'ny Ubuntu Linux Systems. Ny mpampiasa Corebird dia afaka mitantana ny kaonty Twitter avy amin'ny Ubuntu Desktop. Corebird 1.7 Fanambarana: Hashtags sy Mentions amin'ny fanesorana profil ...
Novalian'ny Revue Skype Desktop App
Nova-dika vaovao amin'ny Skype Desktop app no ​​azo ampiasaina Ny new Skype for Desktop client dia mihodina androany manerana ny macOS, Linux ary (version sasany) Windows. 'Ankoatra ny loko matevina sy ny karazan-typografy lehibe dia misy zava-kendrena vaovao ao anatin'ity fanavaozana ity' Raha ...
Torolalana feno amin'ny fampiasana AsciiDoc amin'ny Linux
Fehiny: Ity torolalana amin'ny antsipiriany ity dia manadihady ny tombony amin'ny fampiasana AsciiDoc ary mampiseho anao ny fomba fametrahana sy fampiasana AsciiDoc amin'ny Linux. Nandritra ny taona maro dia nampiasa fitaovana marobe maro aho hanoratra lahatsoratra, tatitra na antontan-taratasy. Mihevitra aho fa nanomboka nikarakara ahy niaraka tamin'ny Epistole an'i Luc Barthelet ny rehetra.
Cat dia manambara S41 Smartphone smartphone: 5 "FHD, IP68 +, 5000 mAh
Cat dia nanambara ny smartphone smartphone vaovao S41 izay natao mba hanoherana ny fepetra faran'izay henjana izay hahomby amin'ny model S40 nampahafantarina taona maromaro lasa izay. Ny modely vaovao dia manana fiovàna manan-danja amin'ny lafiny fampisehoana sy ny "hentitra", ary ho afaka amin'ny vidiny mitovy. Ny fanalahidy ...
1 2 3 4 ... 37 Manaraka
Ahoana ny fametrahana boky ebooks amin'ny Amazon Amazon Kindle
toe-tsaina paoma famerenana Microsoft Twitter PDG Windows 8 Unix Toetoetra Users Windows 10 Up " endri-javatra fifamoivoizana API SSD SEO Support WordPress YouTube USB rafitra Plugins Samsung Galaxy Ubuntu 16 iPhone Time fanamarinana HTTP bilaogy Unité centrale windows update raki-daza Video Microsoft Windows hametraka takelaka fikirakirana Chrome Windows Bing Plugin lalao PPA fitaovana Apache Rafitra fikirakirana Ubuntu 14.10 famotsorana fikarohana 10 GNOME nbsp Phone 'App Samsung HTTPS Database HTML Apple Watch ubuntu 15.04 Screen fitaovana Nginx afa-po Debian Linux Mint SSH fitaovana MAMAKA haino aman-jery sosialy CentOS 7 rindrambaiko Ubuntu (rafitra fandidiana) Fitaovana finday Cortana OS X IP adiresy app store Server bilaogy Company Facebook vaovao farany Google ram Firefox taona Linux Ubuntu Systems MySQL Malagasy Bible loharano misokatra 04 web server fitaovana finday lalao finday avo lenta Ubuntu 14.04 CentOS Ubuntu Command web browser Windows Phone Apps One ' "PC File Linux PHP Android tahirin-kevitra command line